▷ Laptọọpụ ọnụ ahịa 9 kacha mma nke 2022 Kedu nke ịzụrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ imefu ihe na-erughị 1.000 euro na laptọọpụ, Anyị na-akwado ka ị gụọ ntuziaka a ka ịchọta laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ nke kọmpụta kacha mma dị ọnụ ala, nọrọ n'ihi na ebe a ị ga-ahụ ihe nlereanya ị na-achọ, ma n'ihe gbasara ọnụahịa na njirimara.
1 Ntụle laptops dị ọnụ ahịa kacha mma 2021
2 Laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma nke 2021
2.1 Ọnụahịa kacha mma nke laptọọpụ na i5
2.2 Ọnụahịa kacha mma nke laptọọpụ na i7
2.3 Laptọọpụ inch 13 kacha mma
2.4 Laptọọpụ egwuregwu ọnụahịa kacha mma
2.5 Uru kacha mma maka laptọọpụ ego maka ụmụ akwụkwọ
2.6 Laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma nwere SSD
3 Ụdị nwere laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma
4 Kedu otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ahịa?
4.1 Usoro njikwa
5 Ebe ịzụrụ laptọọpụ bara uru maka ego
5.5 Ihe PC
6 Kedu otu esi emeziwanye uru maka ego nke laptọọpụ?
6.1 Ụbọchị Mbụ
6.3 Cyber ​​Monday
6.4 11 nke 11
6.5 Ụbọchị na-enweghị VAT
7 Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala dabere na ojiji ị ga-enye ya
7.1 Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ
7.2 Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ
7.3 Ọ bụrụ na ị ga-egwu egwu
7.4 Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie foto na vidiyo
8 Mkpebi mgbe ị na-azụta laptọọpụ nwere ezigbo uru maka ego
Ntụle laptops dị ọnụ ahịa kacha mma 2021
Iji nyere gị aka ịhọrọ, anyị akwadola tebụl atụnyere ụdị nke anyị chere na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma yana ọnụ ahịa a na-agbanwe agbanwe nke ị nwere ike ịzụta taa.
Maka anyị, ndị a bụ laptọọpụ 7 nwere uru kacha mma maka ego:
Akwụkwọ Huawei Matebook
Igodo T F7S
Asus Vivo akwụkwọ
Lelee azụmahịa flash laptop nke taa
Laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma nke 2021
Ọnụahịa kacha mma nke laptọọpụ na i5
ASUS ZenBook bụ uru kacha mma maka laptọọpụ ego na nke a, na ndị laptọọpụ nwere i5 processor sitere na Intel. Ihuenyo bụ 14 inch n'ogo na nke a, yana mkpebi HD. Ogo dị mma iji rụọ ọrụ na ịnyagharịa na-enweghị nsogbu, yana inwe ike ilele ọdịnaya nkwanye ngwa ngwa.
Ihe nhazi nke ọ na-eji bụ Intel Core i5-1135G7, nke na-abịa na 16GB RAM na 512GB nke nchekwa, n'ụdị ssd na nke a. Kaadị eserese nke etinyere na laptọọpụ a bụ Intel Iris Xe. A na-eji Windows 10 Ụlọ maka sistemu arụ ọrụ, dịka ọ na-eme na kọmpụta kọmpụta a.
Nhọrọ dị mma iji tụlee. Nwere nkwa mma ASUS, nkọwa zuru ezu na-ezute na ọnụahịa dị mma. Ya mere, ọ na-ezute ihe niile anyị na-achọ n'oge a.
Hụ kọmpụta ndị ọzọ nwere i5
Ọnụahịa kacha mma nke laptọọpụ na i7
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ịrị nzọ ụkwụ na ndepụta a, ịkụ nzọ na a laptọọpụ na i7, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ezigbo nhọrọ. Ma laptọọpụ nwere uru kacha mma maka ego na nke a bụ LG Gram. Ihe nlereanya nke ika a nwere ihe ngosi 14 nke anụ ọhịa ahụ, nwere mkpebi HD zuru ezu. Dị mma maka ịrụ ọrụ, igwu egwu, ikiri ma ọ bụ ịchọ ọdịnaya.
Ihe nhazi ọ na-eji sitere na nke a i7, kpọmkwem o nwere ọgbọ ọhụrụ Intel Core i7. Ọ na-abịa na 16 GB RAM na nchekwa n'ụdị SSD N'okwu a, maka ahụmịhe onye ọrụ dị nro karịa. SSD nwere ikike nke 1TB. Ọ bụ ezie na kaadị eserese na nke a bụ Intel Iris Xe Graphics. Ọ nwere sistemụ arụmọrụ (Windows 10), yabụ ka ị nwetara ya, ị nwere ike ịmalite iji ya rụọ ọrụ.
Laptọọpụ dị ukwuu ị ga-atụle, nke nwere ihe nrụpụta nke na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ dị mma n'oge niile. Dị ike, ngwa ngwa ma nwee ahụmịhe dị nro ekele maka SSD ya.
Hụ kọmpụta ndị ọzọ nwere i7
Laptọọpụ inch 13 kacha mma
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ Laptop 13 inch, MacBook Ikuku bụ ezigbo nhọrọ iji tụlee. Nwere a 13,3 inch nha ihuenyo, na mkpebi retina. Ọ bụ ihuenyo dịtụ ntakịrị, mana nke na-eme ka laptọọpụ ahụ dịkwuo mfe iburu gị oge niile ebe ọ bụla wee nwee ike ịrụ ọrụ, mụọ ma ọ bụ lelee ọdịnaya na ezumike gị.
Na-eji ihe nrụpụta Apple M1. Na mgbakwunye, ọ nwere 8GB nke RAM ma nwee nchekwa 256GB n'ụdị SSD. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ịrụ ọrụ ngwa ngwa na nke dị nro mgbe niile na laptọọpụ a site na ika ahụ. Eserese ọ na-eji sitere na Apple kwa. Ezie na ọ nwere ọhụrụ Mac OS version dị ka sistemụ.
Laptọọpụ dị mma, na a n'ezie ọnụ price. Ọ bụ ya mere ọ bụ uru kacha mma maka ego na oke a. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ nke dị ntakịrị karịa ụdị ndị ọzọ, nke a zuru oke. Ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ na ọmụmụ ihe nke ọma, mana na-eji obere kọmpat karịa.
Hụkwa laptọọpụ inch 13 ọzọ
Laptọọpụ egwuregwu ọnụahịa kacha mma
MSI Modern bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma na mpaghara a egwuregwu laptọọpụ na uru kacha mma maka ego. Ọ nwere ihuenyo nke 14 inch n'ogo, nke bụ ezigbo nha ma a bịa n'ịkpọ egwu. Mkpebi dị na nke a bụ Full HD, nke ga-eme ka anyị nwee ekele maka nkọwa niile nke ọma na ya, nke ga-eme ka anyị rụọ ọrụ nke ọma.
Njirimara laptọọpụ egwuregwu a Ihe nhazi nke Intel Core i7-1165G7. Ọ na-abịa na 16GB RAM na 512GB SSD nchekwa, ezigbo ngwakọta maka ezigbo onye ọrụ ahụmahụ oge niile. GPU dị mkpa na laptọọpụ a, na-eji Intel Xe Graphics ọ bụ ezie na enwere nhọrọ iji ya na ụdị dị ike karịa na Nvidia GTX.
una ezigbo nhọrọ na ngalaba laptọọpụ egwuregwu. Ọnụ ahịa dị mma, nkọwa dị mma na arụmọrụ ekwenyere. Ya mere, ọ bụ nhọrọ iji tụlee n'okwu a.
Hụ kọmpụta ndị ọzọ egwuregwu
Uru kacha mma maka laptọọpụ ego maka ụmụ akwụkwọ
El uru kacha mma maka laptọọpụ ego maka ụmụ akwụkwọ bụ CHUWI HeroBook. Iji malite, anyị na-ekwu maka ya nke 2-na-1, nke pụtara na ọ bụ mbadamba na kọmputa dị n'otu ngwaọrụ. N'ihe gbasara ihuenyo ya, ọ bụ IPS laminated nwere mkpebi panoramic 1920 × 1080, ya bụ, 16: 9. Ọ bụ ezigbo mkpebi maka kọmpụta na-egosipụta ọtụtụ ọdịnaya n'otu oghere.
N'ime, laptọọpụ ngwakọ a nwere ihe nrụpụta Gemini-Lake N4100 nke jikọtara na diski ya SSD siri ike, 256GB n'ụdị a, yana 8GB nke RAM ga-enye anyị ohere ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla na ntabi anya.
Aha pụrụ iche kwesịrị ka enwere ike iji ya dị ka mbadamba nkume: nke ihuenyo bụ 10,1 ″, nke dị ihe dịka 2 ″ buru ibu karịa nkezi nha. Inwe ihuenyo mmetụ ga-enyere anyị abụọ aka iji stylus see na ịkpọ ụfọdụ utu aha maka ngwaọrụ mkpanaka. Sistemụ arụmọrụ nke laptọọpụ a na-eji bụ Windows 10, yabụ anyị ejedebeghị na ngwa mkpanaka, mana anyị nwekwara ike ịwụnye ngwa desktọpụ.
Kedu ihe kpatara na ọ bụ uru kacha mma maka laptọọpụ ego maka ụmụ akwụkwọ? Ọfọn, n'ihi na ihe niile dị n'elu anyị nwere ike nweta ya maka a ọnụahịa erughị than 300.
Hụ kọmpụta ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ
Laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma nwere SSD
Lenovo Legion 5 -…
El laptọọpụ kacha mma na SSD Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ Lenovo Legion 5. Ọ bụ kọmputa e mere maka Ịgba chaa chaa, ya bụ, inwe ike igwu egwuregwu vidio n'ụzọ kasị dị irè. Nke a pụtakwara na ọ ghaghị ịgụnye ihe ndị dị ike karịa na kọmpụta ụlọ ọrụ, dị ka 16 GB nke RAM nke ahụ gụnyere laptọọpụ a.
Ma SSD, diski ahụ gụnyere laptọọpụ Lenovo Gaming a bụ nke 512GB, ebe anyị nwere ike tinye ọtụtụ utu aha dị arọ. Ikekwe, ebe adịghị ike nke kọmputa a bụ ihe nhazi ya, ebe ọ bụ na ọ gụnyere i5 nke nwere ike ịbụ ntakịrị ihe ziri ezi, karịsịa n'oge a na-ebufe ọdịnaya, ọ bụrụhaala na anyị zụrụ ya ka ọ kpọọ egwu n'agbanyeghị na anyị nwere nhọrọ ịzụta ya. i7. Ihuenyo nke kọmputa a na-eji bụ ọkọlọtọ-nnukwu, ya bụ, 15.6 ″.
N'ezie, anyị enweghị ike ịchọ nnukwu ihe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kọmpụta kwesịrị ekwesị nke gụnyere ezigbo diski SSD na ọnụ ahịa dị mma. Ma ọ bụ na Lenovo a dị maka erughị than 1000, nke dị obere karịa ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a na-agụnyekwa ihe ndị dị elu karịa.
Hụ kọmpụta ndị ọzọ nwere SSD
Lenovo IdeaPad 1 -…
Ọ bụrụ na ụdị nke gara aga agwụla ma ọ bụ bilie n'ọnụ ahịa nke ukwuu, anyị na-akwado ka ị gaa maka Lenovo Ideapad Slim 1. nke na-efu ihe dịka 300 euro. O nwere 4 GB nke RAM na ebe nchekwa 64GB, ma ọ dị ntakịrị ibu ma dị arọ karịa Acer, na ihuenyo ya adịghị mma, nke na-ewepụ ya dị ka isi ndụmọdụ anyị, ma ọ bụ n'ezie ihe nlereanya ị ga-atụle maka ya. ndị chọrọ ihe dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ na ịnweelarị kọmpụta Windows ma chọọ ngwaọrụ nke abụọ iji chagharịa webụ, lelee email gị, wee rụọ obere ọrụ ụlọ ọrụ, anyị na-akwado Chromebook..
Isi nhọrọ anyị na ngalaba a bụ Chromebook 314
Ọ naghị agbanwe agbanwe dị ka Windows PC, mana 8-core 2Ghz processor yana 4 GB nke RAM, Chrome na-agba ọsọ ngwa ngwa karịa laptọọpụ Windows nwere njiri mara ma ọ bụ nke ka elu. Ị nwere ike ịgụ karịa na ntuziaka anyị na Chromebooks.
Ị chọrọ nhọrọ ndị ọzọ? Agbagharala ndị a ọnụ ala laptọọpụ nke ị ga-abụkwa nke ziri ezi n'ezie.
Ọ bụ ezie na anyị ahụla ọtụtụ laptọọpụ ndị nwere ezigbo mma maka ọnụahịa anyị na-akwụ, ọ bụrụ na m ga-azụta laptọọpụ Windows maka ihe na-erughị 600 euro ma ọ bụ obere, m ga-ahọrọ nhazi nke Acer Aspire 5.
Dịka kọmpụta ndị ọzọ nke nha ya na oke ọnụahịa ya, nke Acer Aspire 5 N'ihe na-erughị euro 600 ọ dị ntakịrị karịa ma dị arọ karịa akwụkwọ ultrabook dị ka MacBook Air, mana ọ bara ọkara ma ọ dịghị efunahụ ya dịka i chere na laptọọpụ dị elu. Ọ nwere ihuenyo HD zuru oke yana SSD. Nwee a Ngwa ngwa Intel Core i5 quad-core processor, 8GB nke RAM na draịvụ ike 512GB SSD, ọ na-abịa na ahụigodo dị mma, trackpad na nkezi ndụ batrị ogologo oge nke na-agaghị etinye ya n'ụbọchị niile.
Ọ dị nfe karịa ọtụtụ ndị otu ya, kwa, yana n'ogo nrụpụta na imepụta ya, ọ dị obere ọnụ ala karịa ọtụtụ laptọọpụ na oke ọnụ ahịa ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere ihe mgbochi nwere ike imeghe ruo ogo 300, ọ bụ ezie na ọ bụghị ya mere anyị ji akwado ya. N'okpuru ị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya Anyị ahọrọla ihe nlereanya a dị ka laptọọpụ kacha mma nwere ọnụ ahịa.
Ka ọ were, Maka ihe na-erughị 600 euro ị ga-enweta ihe nrụpụta quad-core Intel Core i5-1135G7, 8 GB nke DDR4 RAM na 512GB SSD draịva nwere 8 GB nke ebe nchekwa RAM., nke zuru oke maka ọtụtụ ọrụ na-agụnyeghị foto dị arọ, ndezi vidiyo ma ọ bụ egwuregwu vidiyo.
Ụdị ọhụrụ a nwere ọnụ ahịa ezi uche dị na ya ma dị ike karịa, ya mere anyị ji họrọ ya dị ka laptọọpụ kacha mma..
Otu enyi injinia dị ka m mana ọbụna karịa n'ime ngwaike nyere ya kpakpando 4 n'ime ise n'echiche nke ahụ ọ bụrụ na idobe ntọala nke ihe na-erughị euro 800, ị ga-enwe laptọọpụ tozuru oke. Ọ bụrụ na ị gafere ego ahụ, ị ​​nwere ọtụtụ nhọrọ ka mma, karịsịa mgbe ọ na-abịa na ihuenyo na ịdị mma ụlọ, dị ka anyị kwukwara n'elu.
Ndị ọkachamara ndị ọzọ anyị kpọtụrụ kwuru, sị: «Ọ bụrụ na ị na-achọ Laptọọpụ siri ike nke elu-etiti-nke na-abụghị ihuenyo mmetụ nke ị nwere ike iji rụọ ọtụtụ ọrụ gị kwa ụbọchị, Acer A5 nwere Core i5 processor ma ọ bụ nke nwere Core i7 processor bụ ezigbo nhọrọ ”.
Ụdị nwere laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma
Mgbe anyị na-achọ laptọọpụ ọhụrụ, chọta ihe nlereanya nwere uru kacha mma maka ego ọ dị mkpa. N'ụzọ dị otú a, anyị maara na anyị na-azụta laptọọpụ nke ga-eme ka anyị rụọ ọrụ nke ọma, ma na-akwụghị nnukwu ego maka ya. Nke a bụ ihe na-emetụta laptọọpụ ndị a, nke anyị nwere ike ịzụta n'akụkụ dị iche iche.
Chọpụta ihe kacha mma laptọọpụ ụdị na ụdị ndị kacha pụta ìhè nke ọ bụla
Na ahịa e nwere ụfọdụ ụdị laptọọpụ nke na-ezute nke ọma na nke a na-achọ uru ego. Ya mere, ha bụ nhọrọ ndị anyị na-aghaghị iburu n'uche mgbe anyị na-achọ laptọọpụ ọhụrụ:
Ọ nwere kọmpụta dị iche iche, nwere ụdị ụdị dị iche iche, yana egwuregwu. Anyị nwere ike ịchọta ụdị dị mma mgbe niile na ọnụ ahịa dị ọnụ ala, ya mere ọ bụ akara nke a ghaghị iburu n'uche.
Ikekwe nke kasị mara amara na ọtụtụ ndị ọrụ, yana inwe a widest katalọgụ na nke a. Laptọọpụ dị mma, ọnụ ahịa dị ọnụ ala, yana oke dabara adabara ụdị ndị ọrụ niile taa.
Akara China bụ nke kacha ere n'ụwa niile. Ọ bụ ika nke kacha egosipụta uru maka ego. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ kọmpụta dị mma, mana ọ nwere ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Kedu otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ahịa?
Mgbe ị na-ahụ desktọpụ na laptọọpụ na mgbasa ozi telivishọn, a na-enwekarị àgwà abụọ a na-ejikarị kọwaa ihe ihe nlereanya ahụ na-enye anyị. Njirimara ndị a na-agụnyekarị ndị ụdị nhazi, nke ihuenyo na ọnụ ọgụgụ nke ebe nchekwa kọmputa. Echefula, na ebe nchekwa ha na-ezo aka mgbe niile bụ ebe nchekwa ohere ịnweta (RAM), ị gaghị enwe mgbagwoju anya na ikike nchekwa na diski ike ma ọ bụ draịvụ steeti siri ike.
Ka anyị laghachi azụ ntakịrị, kwuo maka otu anyị si edobe ụkpụrụ anyị maka ịchọta laptọọpụ dị ọnụ ala mana dị mma. N'ụzọ bụ isi anyị na-achọ kọmpụta nwere oke ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ maka ihe na-erughị euro 500. O doro anya na ọ bụghị kọmputa dị ọnụ ala ị nwere ike ịhụ ma ọlị, ma ọ ga-abụ ngwaọrụ ị nwere ike iji kwa ụbọchị na nke ị ga-enwe obi ụtọ n'ụzọ ziri ezi ruo afọ ole na ole.
Ọzọ anyị ga-akọwapụta ihe bụ atụmatụ ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-azụta laptọọpụ nwere ọnụ ahịa ezi uche na ngwaike dị ike maka ihe anyị na-akwụ maka ya.
Anyị na-eche na ị bụ nwa akwụkwọ na mmefu ego ma ọ bụ onye chọrọ isi kọmputa. Ebe ọ bụ na anyị anaghị achọ kọmputa nke abụọ, ọ ga-enwe ike ime ọtụtụ ihe dị ka o kwere mee maka mmefu ego kwesịrị ekwesị. Mbadamba ụrọ ma ọ bụ Chromebook nwere ike ikpuchi pasent 80 nke mkpa mgbakọ na mwepụ gị ma dị mma dị ka ngwaọrụ nke abụọ (ma ọ bụ dị ka ngwaọrụ bụ isi maka onye nwere mkpa dị mfe), mana edere ntuziaka a maka ndị chọrọ ngwaọrụ nwere ike ime ya niile. .
Nke a pụtara na anyị na-achọ kọmputa WindowsEbe ọ bụ na Macbook na-amalite gburugburu $ 900 na Linux adịghị mfe maka nkezi onye ọrụ iji. Ọzọkwa, Windows nwere software kacha dakọtara.
Laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma bụ ndị na-enweghị sistemụ arụmọrụ ebe anyị na-echekwa ihe ikike na-efu ma anyị nwere ike nweta ya dị ọnụ ala ma ọ bụ nzọ na sistemụ arụmọrụ efu dị ka Linux ma ọ bụ Ubuntu:
Hụ laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
Site na MacBooks na-egbuke egbuke na ultrabooks na-enweta ọtụtụ nlebara anya, ọ dị mfe ichefu na nkezi mmefu ego maka laptọọpụ ọhụrụ bụ ihe dịka $ 450. Ọtụtụ laptọọpụ 450 euro nwere ihe owuwu nke na-ahapụ ọtụtụ ihe a chọrọ, ike dị ala ma na-adịghị mma iji.. Ị nwereỊ na-echeta netbooks? Paul Thurrott bụ otu n'ime ndị folks na-ata ụta nke netbooks dị ala nke na-ere n'etiti 2008 na 2010 maka ime ka ndị ọrụ zụta akwụkwọ ndetu dị ala ugbu a. "Ị nweta ihe ị na-akwụ maka" bụ eziokwu na njedebe dị ala dịka ọ dị n'elu, na ọtụtụ laptọọpụ $ 450 aghaghị ime ọtụtụ mgbanwe iji nweta ọnụahịa ahụ: skimp na RAM ma ọ bụ ebe nchekwa. oghere oghere, obere ihuenyo mkpebi, ọ bụghị nnọọ ike processors ...
Ọ na-esiri ike ịchọta laptọọpụ dị mma maka ihe na-erughị euro 450. Ọ bụ mgbe anyị rutere nso nke 680-725 euro mgbe anyị malitere ịchọta ihe na-adọrọ mmasị n'ezie, na-enwekarị otu atụmatụ dị ka Ultrabooks dị oke ọnụ, ma na-enweghị ihe niile. Mgbe awa nyochachara na ntụle nke atụmatụ, anyị ahụla na ọnụahịa nke ngwaọrụ kachasị mma na-achọta bụ 590 euro.
Laptọọpụ dị na oke ọnụ ahịa a Ha dị ike zuru oke iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ ma na-anọchite anya mmụba dị mma n'ihe gbasara owuwu na arụmọrụ, ọ bụ ezie na a ka nwere ndị na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ maka laptọọpụ dị ọnụ ala, n'echiche ya niile. Anyị maara na euro ọ bụla bara uru, mana ka ị na-azụta laptop nke ọma ugbu a, obere nkụda mmụọ ị ga-enwe ugbu a na n'ọdịnihu. N'ezie, mgbe ịzụrụ laptọọpụ, ihe ị na-azụta oge, oge ga-agafe ruo mgbe ị ga-azụrụ nke ọhụrụ. Ịchọrọ ngwa ị ga-eyi ogologo oge, ọ bụghị nke na-akụda gị mmụọ ozugbo na igbe ahụ.
Ihe anyị na-achọ na laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma bụ: a dual-core processor ma ọ bụ ka mma; ọbụlagodi otu i3 laptọọpụ, ọ bụ ezie na ezigbo bụ a i5 laptọọpụ; ọ dịkarịa ala 8 GB nke RAM na 500 GB nke nchekwa; Otu SSD ga-adị mma n'ihi na ha na-eme ka rig ahụ nwee mmetụta ngwa ngwa, n'agbanyeghị na ọ gaghị ekwe omume n'ezie na ọnụahịa ọnụahịa a, ma ọ bụrụ na nke a ga-abụ naanị kọmputa gị, ị ga-achọ ohere nchekwa ọzọ nke diski ike na-enye gị. . Na kacha mma anyị nwere ike nweta obere caching SSD iji nyere aka na ọrụ ndị na-adịkarị. Ọ bụrụ na ịzụtara laptọọpụ kachasị mma, na mgbakwunye, mgbe e mesịrị, mgbe ị nwere ike imeli ya, ị nwere ike ịgbanwe draịvụ ike nke o nwere na ndabara maka SSD (dị ka ọ dị na nhọrọ anyị).
Taa, laptọọpụ ọ bụla ga-enwerịrị USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, 802.11n WiFi (ọkacha mma abụọ band), Bluetooth 4.0, ihe SD kaadị na-agụ kaadị, na ụzọ jikọọ ihe mpụga ileba anya.. Ngwa niile na-abụghị nke Ultrabook kwesịkwara inwe a Ethernet mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ahụigodo na trackpad kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ nke ọma na ịchọghị ijikọ ahụigodo ma ọ bụ òké mpụga, ndụ batrị kwesịrị ịdị karịa nkezi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ na-ebuga laptọọpụ gị na klaasị.
Ihuenyo mmetụ abụghị ihe dị mkpa. Ọ bara uru maka interface onye ọrụ nke Microsoft webatara na Windows 10, mana interface ahụ nwere ngwa ole na ole bara uru n'ezie. Ọ bụrụ na ị na-eji desktọọpụ omenala ọtụtụ oge, ịzere ihuenyo mmetụ bụ ụzọ dị mma iji chekwaa ibu na ego. Ngwa anya mbanye bụ ego.
Ka obere ibu ga-aka mma; Ị gaghị ahụ atụmatụ na mbugharị nke ultrabook n'ọnụ ahịa a, mana ị ga-enwe ike ịkwanye laptọọpụ gị n'ime akpa wee pụọ n'enweghị nsogbu. Ọ dị mfe ịnweta RAM na oghere mbanye dịkwa mma ịnwe, dịka ịkwalite RAM ma ọ bụ ịgbakwunye SSD nwere ike iweta ndụ ọhụrụ na laptọọpụ ochie gị. Na mgbakwunye, ọ dị mma ịmalite na isi ihe wee tinyekwuo ka mmefu ego gị na-enye ohere.
Nha ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu na sentimita asatọ anyị chọrọ na ihuenyo. Ọ bụrụ na ọ bụ 15 ma ọ bụ karịa, nha ya na oke ya ga-ebuwanye ibu ma ọ bụrụ na anyị na-akwaga n'ahịrị ọnụ ahịa a, na-ahapụ ụdị ọkụ ọkụ na nke dị nro maka ụdị dị elu nke ga-efu okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ n'ọtụtụ ọnọdụ.
Dabere na ojiji nke ị ga-enye kọmputa, ị nwere ike ịnwe ụfọdụ 13 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ ma ọ bụ na ịchọrọ nnukwu diagonal ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya maka ọrụ nhazi, ọrụ, wdg.
Ebe ịzụrụ laptọọpụ bara uru maka ego
Amazon bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ewu ewu maka inye ihe niile, na ọnụ ahịa dị mma yana ezigbo ndị ahịa na ọrụ ire ere. Na ihe niile ha na-ere, ọ ga-esi ike ikwu ihe ha siri ike ma ọ bụ ngwaahịa kpakpando ha bụ, ma enwere m ike ime ka obi sie gị ike na ha na-emekọrịta ihe nke ọma na ihe eletrọnịkị, dịka mbadamba, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ laptọọpụ. N'ime laptọọpụ ndị ha na-enye anyị nwere ike ịchọta ihe kachasị ike, dị oke ọnụ na nke kachasị mma, ma ndị ọzọ nwere ezi uche na uru dị mma maka ego nke, dị ka anyị kọwara, ga-enwekwa nkwa kachasị mma.
Ònye na-anụbeghị okwu ahụ bụ "Abụghị m onye nzuzu" na mgbasa ozi telivishọn? Anyị nwekwara ike ige ya na redio ma ọ bụ hụ ya na akwụkwọ mmado, mana mgbe ọ bụla ihe a na-akpọsa bụ ụlọ ahịa Mediamarkt. Okwu okwu a na-ezo aka n'eziokwu na anyị ga-adị njikere ịzụta n'ụlọ ahịa na-enye ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa dị mma, na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ụlọ ahịa a na-abịa site na Germany na onye ọ bụla. ọpụrụiche bụ akụkọ metụtara eletrọnịkị. N'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ ụdị kọmpụta dị iche iche, nke pụtara na anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti ndị kachasị ike na nke dị oke ọnụ na nke kachasị ọnụ ahịa na akọ.
Worten bụ ụlọ ahịa Portuguese nke na-elekwasị anya na ngwaahịa eletrọnịkị. Ọ na-arụ ọrụ na Iberian Peninsula na ihe niile ọ na-enye bara uru maka ego. N'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ laptọọpụ, n'ime nke anyị nwere ike ịhọrọ ụfọdụ ndị dị ike karị, na-eji atụmatụ ka mma na ọnụ ahịa dị elu ma ọ bụ ndị na-enye ego ka mma.
Carrefour bụ yinye nnukwu ụlọ ahịa sitere na France. Ha na-ewu ewu karị maka ịchọta ụlọ ahịa ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ bi na ya, na n'ime ha anyị nwere ike ịzụrụ ihe anyị na-azụ kwa ụbọchị, ma ha nwekwara nnukwu ụlọ ahịa na obodo ma ọ bụ ụdị ntanetị ha ebe anyị nwekwara ike ịzụta ihe eletrọnịkị, dị ka. mobiles, mbadamba na laptọọpụ. Carrefour bụ ụlọ ahịa ahụ na-enye ọnụ ahịa dị mma na ngwaahịa niile, ihe anyị nwekwara ike iji uru na kọmputa gị, laptọọpụ ma ọ bụ na desktọọpụ.
Ngwa PC bụ ụlọ ahịa ahụ malitere ire kọmputa na components maka ha, ya mere aha ha. Ọ bụ ezie na ka oge na-aga, ha na-agbakwunye ngwaahịa ndị ọzọ na katalọgụ ha, ọ ka dị na ngalaba IT ha ebe anyị ga-achọta onyinye kachasị mma, dị ka kọmputa nwere uru dị mma maka ego ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ọnụ ahịa dị elu maka ndị ọrụ na-achọsi ike karị.
Kedu otu esi emeziwanye uru maka ego nke laptọọpụ?
Enwere ụlọ ahịa ndị na-enyerịrị ezigbo ego maka ego n'onwe ha, mana ọ nwere ike ịka mma? Azịza ya bụ ee, mana maka nke a anyị ga-eji ohere nke mmemme pụrụ iche dịka ndị a:
El Ụbọchị Mbụ bụ ihe omume ahịa nke Amazon na-enye maka ndị ahịa Prime gị, nke a na-akpọbu Premium. Ọ bụ ezie na ọ na-ekwu "Ụbọchị", n'eziokwu, ha na-abụkarị ụbọchị abụọ anyị nwere ike iji uru n'ime ọnwa October, ma maka nke a, anyị ga-edebanye aha na ọrụ nke nwere ọnụ ahịa nke € 36 / afọ, nke m chere. dị mkpa ikwu na ọ ga-enyekwa anyị ohere ịnweta ọrụ dịka Amazon Prime Video.
N'oge Prime Day, anyị ga-achọta ego dị mkpa, ya mere ịzụrụ laptọọpụ n'oge ihe omume nwere ike ịtụgharị n'ime ego nke narị otu narị euro, dabere na ụdị a họọrọ, ọ bụrụhaala na anyị bụ ndị ahịa Amazon Prime na anyị na-azụta n'ụlọ ahịa gị ihe ndị gụnyere. mbelata n'oge ihe omume.
El Black Friday na laptọọpụ Ọ bụ ụbọchị ire ahịa si na United States gbasaa n'ụwa niile. A na-eme ya na Fraịde ikpeazụ n'ọnwa Nọvemba ma ọ bụ nko na ụlọ ahịa na-atụba anyị ka anyị wee malite ịzụ ahịa ekeresimesi anyị.
N'oge Black Friday anyị ga-ahụ ego n'ụdị ngwaahịa ọ bụla, dị ka laptọọpụ ndị ire ere nwere ike jupụta na agba ihe rere ere na mbụ dị ka Friday "oji".
Monday na-esote Black Friday, nke bụ nke ikpeazụ nke November ma ọ bụ nke mbụ nke December, na Cyber ​​​​Monday na laptọọpụ, ụbọchị ọzọ ịkpọ anyị òkù ịzụ ahịa Christmas. Ozizi na-ekwu na "Cyber ​​Monday" bụ ihe omume nke anyị ga-ahụ ego naanị ngwaahịa eletrọnịkị, Ya mere, ego ndị ahụ nwere ike ịdị mma karịa nke Black Friday na ụdị isiokwu a, ma ụlọ ahịa ahụ nwekwara ike iji ya mee ihe iji belata ngwaahịa ndị ọzọ.
N'iburu n'uche na Cyber ​​​​Monday bụ ụbọchị ịzụta ngwa eletrọnịkị ego efu, ọ nwere ike ịbụ ụbọchị gị ma ọ bụrụ na ihe ị na-eche bụ imegharị laptọọpụ gị ma jiri ego kacha mma mee ya.
11 nke 11
11 nke 11? Ee mana gịnị kpatara? Ọ dị mma, n'ụzọ bụ isi ọ bụ ụbọchị azụmaahịa ọzọ nke azụmaahịa na-akpọ anyị ka anyị rie, na ngọpụ a họọrọ na Nọvemba 11 bụ na ọ bụ ụbọchị ọmụmụ. Ka ị na-agụ.
Site na mgbasa ozi ụfọdụ, a ghọtara na ọ bụ ụbọchị na-enye obi ụtọ maka ndị na-alụbeghị di na nwunye na-ere ahịa, ma n'eziokwu, onye ọ bụla nwere ike iji ohere nke onyinye a, ma anyị alụbeghị di, na nkwa, di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm, ọ bụrụhaala na anyị nwere kaadị kredit nwere ego.
Ọ bụghị ụbọchị ọtụtụ azụmaahịa na-eme ememe dị ka Black Friday ma ọ bụ Cyber ​​​​Monday, mana o yikarịrị ka na Nọvemba 11 anyị nwere ike zụta laptọọpụ wee jiri ezigbo ego mee ya. Na, ebe anyị bụ, ndị ihere nwere ike iji ya chọta onye mmekọ online.
Ụbọchị na-enweghị VAT
Ụbọchị na-enweghị VAT bụ ụbọchị onye ahịa ọ bụla nwere ike ịnye n'oge ọ bụla. Ha nwere ike ime ya n'ihi na ọ bụ iwu, ebe ọ bụ na, n'eziokwu, ụlọ ahịa na-akwụ VAT, ma anyị na-akwụ ụgwọ dị ka a ga-asị na ha enweghị ya.
N'ime ụbọchị ndị a, ngwaahịa nwere ọnụ ahịa nke € 1.21 ga-aba uru € 1, ya bụ, Mbelata ga-abụ 21%. Ya mere, ọ bụrụ na anyị zụtara kọmputa na maka afọ ndị ọzọ nwere ọnụ ahịa nke 1000 €, n'ụbọchị na-enweghị VAT, anyị ga-akwụ naanị 800, ya mere, ọ bụ ụzọ ịzụta kọmputa nke bara uru maka ego.
Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala dabere na ojiji ị ga-enye ya
Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, kọmpụta kacha mma ga-adabere na ọkachamara gị. Ọ bụrụ na ọmụmụ ihe gị chọrọ sọftụwia dị ike, ị ga-eburu n'uche nke a wee họrọ laptọọpụ nke nwere ike ibugharị ngwa ndị ị chọrọ. Ma ihe ndị ọzọ ga-abụ n'ozuzu maka ụmụ akwụkwọ niile: kọmputa na-adọrọ mmasị mfe ibufe na na ọ nwere ezigbo batrị, n'ihi na anyị nwere ike iji ya na oche oche n'ụlọ, ma anyị ga-achọkwa ibuga ya na klaasị mahadum.
Ya mere, ihe ụmụ akwụkwọ ga-ahọrọ bụ kọmpụta nwere ikike nke karịrị awa 6 iji, nke na-adịghị arọ, nke ọ nwere ike inye aka na ọ nwere ihuenyo 12-14 inch, yana ikike zuru oke iji bugharịa ngwa ndị ahụ. na ọpụrụiche chọrọ. Ụzọ kachasị mma isi mee nke a bụ iji ohere nke mmemme ire ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụrụ na nke ahụ agaghị ekwe omume, ọ bara uru ileba anya na isi ihe ndị dị n'elu.
Hụ laptọọpụ maka ọmụmụ ihe
Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ
Laptọọpụ kacha mma iji rụọ ọrụ ga-adabere na ọrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ n'ọfịs, anyị ga-achọ naanị otu otu ike ịkwaga ngwa ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụfọdụ mmemme akọwapụtara nke ha na-ajụ anyị n'ọrụ anyị. Mana ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ imewe ma ọ bụ jiri mmemme dị arọ, anyị ga-achọ kọmpụta nke na-agaghị eme nke ọma na ihe na-erughị Intel i5 processor ma ọ bụ ihe dakọtara, 4GB nke RAM na diski SSD.
Ma eleghị anya, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke ọma karị, anyị nwere ike inwe mmasị na kọmpụta nwere Intel i7 processor ma ọ bụ ihe dakọtara, 8GB nke RAM na diski SSD, nke ga-enye anyị ohere iji ngwa ngwa buru ibu data. Banyere mgbe ịzụrụ ha, ọ kacha mma iji ohere nke ụbọchị pụrụ iche a kpọtụrụ aha n'elu.
Hụ laptọọpụ ka ọ rụọ ọrụ
Ọ bụrụ na ị ga-egwu egwu
Laptọọpụ egwuregwu enweghị ike inwe akọ. Iji nụ ụtọ egwuregwu anyị, anyị chọrọ ihe na-adịghị n'okpuru processor Intel i7 ma ọ bụ ihe dakọtara, 8GB nke RAM na 512GB SSD ike, ma ihe niile ga-aka mma ma ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ ihe na Intel i9 processor ma ọ bụ dakọtara, 16GB ma ọ bụ 32GB nke RAM na 1TB hard drive ga-adabara egwuregwu niile anyị chọrọ. Na mgbakwunye, anyị ga-achọkwa ihe nwere ezigbo ihuenyo mkpebi nke na-ekwesịghị isi na FullHD gbadata, keyboard na-eguzogide ọgwụ yana ikekwe yana ọkụ RGB.
Ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta ha nke ọma maka ego bụ ịzụta ha n'ụlọ ahịa ndị a maara maka ịnye ọnụahịa dị mma na ihe omume ire ere nke anyị kwuru n'elu.
Hụ laptọọpụ egwuregwu
Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie foto na vidiyo
Ịdezi foto abụghị ọrụ dị oke arọ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ ga-adabere na mbipụta na mmemme eji eme ya. Ma ịmepụta vidiyo nwere ike ịbụ ọrụ dị arọ. N'oge a, emeela m ya na usoro dị iche iche, dị mfe ma dị arọ, yana ụdị ngwanrọ ọ bụla, m ga-ekwu na ihe niile ga-aka mma ka ngwá ọrụ ahụ dị ike karị. Ma ọ bụ na, n'oge edezi, ọ bụrụ na otu ahụ nwere ihe ndị kwesịrị ekwesị, ọ ga-abụ na ọ gaghị enwe ike ịhụchalụ ọdịnaya, ọ bụghị ikwu na nsụgharị ahụ nwere ike iwe ogologo oge.
Ya mere, m ga-akwado ma ọ dịkarịa ala ịzụta kọmputa nwere Intel i7 processor na 8GB nke RAM, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ihe m nwere na enwere mbipụta nke m na-eche na ihe niile dị oke arọ. Ya mere, ọ bụrụ na anyị dabere na ntinye vidiyo, m ga-akwado ngwaọrụ yiri nke a na-eji na egwuregwu, nke bụ Intel i7 ma ọ bụ ka mma. i9 ma ọ bụ otu, 16GB ma ọ bụ 32GB nke RAM na, iji chekwaa ihe niile edeziri, nnukwu diski SSD nke na-erughị 512GB. Na ịzụta ha na ọnụ ahịa kacha mma maka ego, ọ kacha mma ịzụta ya na ụlọ ahịa pụrụ iche na ụbọchị ire ere dị ka ndị a kpọtụrụ aha na isi ihe ndị gara aga.
Lelee laptọọpụ iji dezie vidiyo
Mkpebi mgbe ị na-azụta laptọọpụ nwere ezigbo uru maka ego
Ọ bụ ezie na ndụmọdụ ndị a niile bara uru, anaghị ebupụ naanị ọnụ ahịa dịka ihe kpatara ya zụta laptọọpụ dị ọnụ ala. Laptọọpụ kacha mma bụ nke na-egbo mkpa anyị ma ọ bụrụ na anyị zụtara ụdị nke na-adabaghị ihe anyị chọrọ, ịzụrụ ahụ nwere ike bụrụ ọnụ ahịa ogologo oge karịa ma ọ bụrụ na anyị etinye obere ego ozugbo iji nweta laptọọpụ ahụ. na-ezute ha niile, ihe anyị na-achọ.
Dịka ọmụmaatụ, nwa akwụkwọ nwere ike iche na uru kacha mma maka laptọọpụ ego bụ nke dabara n'ime a mmefu ego na-erughị 500 euro mgbe onye ọkachamara na-ese foto ga-atụle na kọmputa kacha mma ga-abụ nke na-enye ohere nweta ihe kacha mma na euro ọ bụla etinyere na ya ọ bụrụgodị na a ga-emefu ya ugboro atọ ma ọ bụ anọ karịa nwa akwụkwọ ahụ.
Recuerda que Ịzụta laptọọpụ na-akwụkarị ụgwọ maka onwe ya mgbe afọ nke anọ ma ọ bụ nke ise gasịrị ya mere ọ bụrụ na nhọrọ ọjọọ na-eme ka anyị gbanwee kọmputa tupu oge eruo, mgbe ahụ ọ gaghị abụ ezigbo nnweta.
N'ezie, ị ga-ewerekwa na ị gaghị azụta ngwá ọrụ kachasị mma n'ahịa ebe ọ bụ na anyị na-emeziwanye uru nke anyị ga-enweta maka ihe anyị ga-akwụ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ahịa » Ọnụahịa kacha mma laptọọpụ
26 kwuru na "ọnụahịa laptop kacha mma"
Ọktoba 2017-06 na elekere 08:4 nke abalị
Ndewo, a ga m atụnyere laptọọpụ, enwere m mmefu ego nke euro 400, ọ ga-amasị m ihuenyo 15 ″ na 8 gigs nke ebule, amaara m na ọ dị ọtụtụ ịjụ mana gịnị ka ị na-akwado?
Ọktoba 2017-06 na elekere 09:11 nke ụtụtụ
Ndewo Antonio, na nke a, anyị na-akwado ka ị lelee ntuziaka akwụkwọ ndetu 15 (ị ga-ahụ ya na menu site na nha) na ị ga-ahụrịrị ihe ị na-achọ. Daalụ maka ịkwụsị
Ọktoba 2017-06 na elekere 22:6 nke abalị
ọ dị mma, amachaghị m gbasara isiokwu a na ikekwe ihe ndị ị kọwapụtara gbanarị m, amakwaghị m nke ọma ka m ga-esi dokwuo anya na ikpebi. Enwere m mmefu ego nke dị n'etiti euro 500 na 600 na ọ ga-amasị m laptọọpụ dịpụrụ adịpụ nke ga-enyere m aka ịchekwa, ụfọdụ akpaaka ụlọ ọrụ, dezie vidiyo, kpọọ ụfọdụ egwuregwu ndị ọzọ n'ọdịnihu ụdị simulator ma ọ bụ njikwa egwuregwu (Abụghị m a very gamer or very handyman in editing, ọ ga-abụ mmalite dị mma), hụ ihe nkiri wdg ... gịnị ka ị ga-akwado m kpọmkwem? 2 ma ọ bụ 3 nhọrọ ịga agbapụ karịa ihe ọ bụla ma ọ bụ na-echeghị ka ọ dị. Daalụ nke ukwuu.
Ọktoba 2017-06 na elekere 23:9 nke ụtụtụ
Kedu maka Bruno. Ọ bụ ezie na ọ siri ike ịchọta laptọọpụ ọnụahịa kacha mma maka mmefu ego nke 500-600 nke m bu n'uche mgbe m na-agụ nkọwa gị bụ. onye a ebe a, nke anyị jikọtara gị onyinye na-arụ ọrụ nke ọma. Chee na maka ọnụ ahịa ndị a laptọọpụ na-ebu ụzọ na-ata ahụhụ site na kaadị eserese, mana ị gaghị enwe nsogbu na nke a ebe ọ na-apụta nke ukwuu. N'ezie, ọ ga-adaberekwa na ole ị na-ajụ, ma ị gaghị enwe nsogbu na nke a. Ọ bụrụ na ọ masịghị gị, a ga m akwado nzacha na menus site na ọnụahịa na n'ezie anyị nwere otu atụnyere nke na-egbo mkpa ndị a.
Ọktoba 2017-06 na elekere 27:11 nke abalị
Ndewo, m na-eche ịzụrụ ikuku MacBook mana amataghị m ma ọ bụ naanị imewe na ika na-eduzi m, ma ọ bụ na ọ bara uru n'ezie.
Enweghị m echiche gbasara kọmpụta. Mana achọrọ m laptọọpụ maka ọrụ, weta ma weta n'ụlọ ikpe, tinye onye na-agụ kaadị, lelee ozi ịntanetị, wụnye mmemme izipu m ... yabụ n'elu akpaaka ụlọ ọrụ niile ... n'agbanyeghị na m nwekwara ike ile ihe nkiri.
Echere m na laptọọpụ a, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ọnụ, na-ezute àgwà ndị a, dị gịrịgịrị, nke oge a na arụ ọrụ. Ihe nlereanya a ọ na-ezobe ihe m na-amaghị? Ị nwere ike ịwụnye windo na ihe niile nkịtị, nri? Enwere m obi abụọ bụ isi na ọ bụrụ na ị nwere ike iduzi m, ana m ekele gị.
Daalụ nke ukwuu!!!! Ekele
Ọktoba 2017-06 na elekere 28:7 nke ụtụtụ
Ndewo Rocio, ị zutere onye na-akwado Macbook 🙂 Ọ bụ ezie na agbalịrị m ọtụtụ Mac bụ isi m. Echeghị m na a ga-ewere ya dị ka laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala ebe ọ bụ na ị na-ekwu na ọ dị ntakịrị ọnụ, ma na ahụmahụ m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ya, ị nwere ike ma ị gaghị eme ya, ị ga-eme ya mgbe niile. lee ya anya na anya n'akụkụ ... Ikwu bụ na ị nwere ike ịkọrọ onwe gị nke ọma banyere mmemme ịchọrọ ịrụ ọrụ. N'okwu m enwere m Parallels arụnyere na Windows ka m na-eji sistemụ arụmọrụ abụọ n'otu oge (ha na-ejikọta). Ọ dabara nke ọma, laptọọpụ ndị a adịghị ọnụ dị ka afọ ụfọdụ ma dị ọnụ ala karịa dabere na nhazi nke ị họọrọ. M na-ekwu na maka nke ahụ, ị ​​ga-agwa anyị banyere ahụmahụ!
Ọktoba 2017-06 na elekere 28:8 nke abalị
Anọla m na Laptọọpụ akara Asus m afọ 5, ọ na-efu m ihe dị ka € 550 na ụbọchị ọzọ nne nne m gbara ọkụ, amara ga-efu m € 150, laptọọpụ m na-eji maka ọrụ bụ ịchekwa akwụkwọ na ihe onyonyo iji nye. Ọrụ Site na ọrụ m, achọrọ m ịma nhọrọ ị na-enye m iji dozie laptọọpụ ma ọ bụ zụta nke ọhụrụ dị oke mma n'etiti 800 € 900
Daalụ nke ukwuu maka azịza gị.
Ọktoba 2017-06 na elekere 29:10 nke abalị
Ndewo John!! mbụ kelee gị maka ịkọrọ ndị neophytes ihe ọmụma gị na okwu ndị a ????
Nyere nnukwu ahịa maka laptọọpụ ugbu a, ara na-agba m na-achọ nke kacha dabara adaba maka mkpa m, yabụ etinyere m onwe m n'aka gị ka ị kwado m. Isi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche bụ maka ọrụ ụlọ ọrụ: akpaaka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nzipu ozi na ịnweta ụlọ ọrụ eletrọnịkị nke nchịkwa ma ọ bụ ihe ndị dị ndụ; n'oge ụfọdụ, ọ bụ ezie na ọ na-adị obere oge, ihe nkiri. Naanị ihe m ga-etinye ga-abụ nnukwu ihuenyo zuru oke.
Banyere mmefu ego, ọ ga-amasị m imefu n'etiti narị narị atọ na narị ise.
Ọktoba 2017-06 na elekere 30:10 nke ụtụtụ
Daalụ maka okwu ndị a Alfredo, ị na-agba anyị ume ka anyị gaa n'ihu 🙂 Site na ihe ị na-agwa m na mmefu ego ị nwere, echere m na ị nwere ike ịchọta ihe na-adọrọ mmasị na blọgụ. Ọ bụrụ na ị kpughee menu, ị ga-ahụ na e nwere ngalaba «site price» na e nwere «erughị 500 euro». N'ebe ahụ, ị ​​​​ga-ahụ ntụnyere niile nke m kpọtụrụ aha na laptọọpụ nwere ọnụ ahịa n'okpuru 500. Ya mere, ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ otu 13-inch, ị ga-abanye n'ebe ahụ ma ị ga-ahụ na e nwere ihe nlereanya. N'ime ndị a na ọnụ ahịa a, yabụ ejiri m n'aka na ị na-achọta laptọọpụ kacha mma maka ego na ihe ị na-agwa m. Ọ dabara nke ọma, ị nweghị mkpa na-achọsi ike, na ọganihu ugbu a, ị ga-ahụ ụfọdụ n'etiti euro 300 na 500. Ọ bụrụ n’ịhụ na ozugbo n’ime gị, ọ bụghị naanị ịkọwapụta, enwere m ike ịme ndụmọdụ kapịrị ọnụ mana ile anya na menu ị nwere ike họrọ ntụnyere na laptọọpụ nwere njirimara ụfọdụ. chioma!
Ezigbo aha Juan! Ọfọn, n'echiche nke m, m ga-akwado ịzụrụ nke ọhụrụ. Ugbu a afọ 5 na laptọọpụ dị nnọọ ukwuu, ma ọ bụrụ na taa ị na-edozi motherboard ọ ga-atụfu gị oge ọzọ mana ọ bụ naanị ruo mgbe nsogbu ọhụrụ pụtara. Ego mmefu ego ị nwere dị m ka ọ buru ibu karịa ọtụtụ, yabụ ị nwere ike zụta ụdị ọhụrụ nke ga-ewe gị ọtụtụ afọ na nke na-agaghị egbu oge karịa oge. Ọ bụrụ n’ilegharị anya na blọgụ, ị ga-ahụ n'ezie akwụkwọ na-enyere gị aka ịhọrọ. Jisie na nke a na ị nwere ike ịgwa m. Izu ọma.
Ọktoba 2017-06 na elekere 31:1 nke ụtụtụ
Ọ dị mma Juan, ahụla m atụmatụ gị ma ọ dị ka ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, agbanyeghị, onyinye na-atọ ụtọ na-abịakwute m site na enyi m, ọ ga-amasị m ịma echiche gị banyere laptọọpụ a, ọ bụ Asus F552WS-SX147H na ọnụahịa ya Ọ bụ bụ 329 Euro.
N'ile anya mbụ ọ dị m ka laptọọpụ karịrị ihe m chọrọ.
Ndị a bụ njirimara ya:
AMD E1-2100 na 1.0GHz
Ebe nchekwa 8GB DDR3L 1600MHz RAM
1TB SATA 5400rpm ike mbanye
Ihuenyo 15.6 ″ LED HD 1366 × 768 16: 9
Teknụzụ ikuku: 802.11 a / b / g / n
Onye na-agụ kaadị: SD (SDHC / SDXC)
4 cell batrị
Kedu ihe ị chere? Ndị a bụ
Ọktoba 2017-06 na elekere 04:11 nke ụtụtụ
Ana m achọ laptọọpụ ọhụrụ, nke nwere uru kacha mma maka ego, nke ga-anọru m ọtụtụ afọ (ugbu a, m ka na-arụ ọrụ na Lenovo ThinkPad site na afọ 15 gara aga !!) yana ego kachasị elu nke € 700. .
Kedu echiche gị maka Asus X556UJ-XO001T?
Batrị na-enweghị ike iwepụ yiri ka ọ dị m njọ, ma isi ihe bụ na amaghị m ma ọ bụrụ na ụdị batrị ndị a na-ejide, ma ọ bụrụ na ụdị ụdị a na-esiri ike ịgbanwe ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọnụahịa nke akụkụ ahụ mapụtara, wdg.
Daalụ nke ukwuu maka okwu gị!
Ọktoba 2017-06 na elekere 05:11 nke ụtụtụ
Ndewo Angel. Nke ị na-ekwu maka ya adịghị njọ mana anyị emelitere akụkọ na nso nso a. Ọnụ ego nke laptọọpụ anyị na-akwado bụ ọbụna ọnụ ala ma ọ nwere nkeji ole na ole fọdụrụ. Tupu Asus, m ga-akwado Lenovo nke ga-eju gị anya ka ị jiri ya tụnyere ihe ochie gị 🙂 Na batrị ọtụtụ laptọọpụ adịlarị otu n'ime mgbanwe maka ime ka ha dị gịrịgịrị. Ma ị ka nwere ike ịhụ ụfọdụ. Nke a ga-adabere na ojiji ịchọrọ inye ya nke ọma. Echiche kacha mma!
Ọktoba 2017-06 na elekere 05:12 nke abalị
Mana Lenovo dị m ka ọ nweghị ọdụ ụgbọ mmiri VGA. Nke ahụ bụ, ebe m na-ajụ, ebe m na-eji ya ruo ọtụtụ awa, ọ ga-amasị m inwe ike ijikọ ihe nleba anya VGA m nwere. Asus X556UJ-XO001T nwere ntakịrị nkọwa ahụ, nke m na-achọ.
Enwere ndụmọdụ ndị ọzọ sitere na Lenovo ma ọ bụ akara ọzọ?
Ọktoba 2017-06 na elekere 10:7 nke abalị
Ndewo, m ga-agbanwe laptọọpụ, ọ ga-amasị m ịma na ugbu a na ndị na-emepụta ọgbọ nke isii apụtala, ọ bara uru ịzụta otu n'ime ihe ndị a ma ọ bụ na ọ bụghị n'ezie ihe dị iche? Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwado ụfọdụ ọgbọ nke isii.
Ọktoba 2017-06 na elekere 11:10 nke ụtụtụ
Ndewo Rafa. Ọ bụrụ na ojiji gị na-achọsi ike, ọ ga-ekwe omume na ọ na-eme ka ọ dị iche, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ụdị site na ruo ugbu a ị nweghị nsogbu, agaghị m akwado ya n'ihi ọdịiche ọnụahịa.
Ọktoba 2017-06 na elekere 14:4 nke abalị
Ndewo Jọn! Ekele dịrị akụkọ 😉
Ihe mbụ, iji gwa gị na Lenovo ewepụlarị flex 14 na katalọgụ ya ka anyị nwee ike ịmalite ụdị Yoga ọhụrụ ya.
Ihe nke abụọ: Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka na nhọrọ m. Enwere m mmasị na Surface pro 4 maka imewe na ọrụ ya. Mana ọ dị oke ọnụ. Kedu ihe ị ga-atụ aro ka ọ bụrụ ihe ọzọ? Ihe dị ọkụ, dị ike yana ezigbo mmetụ maka imewe eserese na mmemme dị ka Photoshop, Illustrator… elere m Lenovo Yoga 700 anya. Mana n'echiche ha, ahụrụ m na ha na-eme mkpesa ntakịrị banyere keyboard nakwa na ọ dị ntakịrị arọ. Kedu ihe ị chere?
Ọktoba 2017-06 na elekere 15:9 nke ụtụtụ
Daalụ maka ikwu! Ezigbo Rodrigo, mana ka enwere ngwaahịa Flex 14, m ga-aga n'ihu na-akwado ya ruo mgbe ị ga-azụrụ ọzọ, nke ị na-ekwu ga-abụ n'oge na-adịghị anya ebe ọ bụ na ewepụrụla ya 🙂
Na ihe ị na-achọ ma ọ bụrụ na ị nweghị ike iji Surface pro 4, na ahụmịhe m ma a bịa n'ihe gbasara ngwa ma ọ bụrụ na ịzụrụ laptọọpụ ọzọ ọbụlagodi na ọ nwere ọnụahịa ka mma mana ọ bụghị elu, ị ga-achọ ya. ruo mgbe ị zụrụ ya hehe a ga m agwa gị ka ọ daa n'ọchịchọ gị! Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ihe ọzọ, na menu m nwere nyocha na Site Ụdị> Maka imewe eserese dị ka HP Envy 15, agbanyeghị na ọ na-efu ọnụ dị ka elu. Ọ bụrụ na ị gwa m karịa ma ọ bụ obere ihe mmefu ego ị nwere, enwere m ike ịhọrọ ụzọ zuru ezu zuru ezu nke nwere ọrụ dịka o kwere mee na abụọ ndị a. Ekele!
Ọktoba 2017-06 na elekere 15:11 nke ụtụtụ
Daalụ maka azịza! Ọ dị mma, ụdị nke elu nke m ga-eji keyboard ya zụta ga-eri ihe dị ka € 1200 na 5 GB i4, n'ihi na echere m na M3 nwere ike ịda ada, ma ọ bụ na ọ bụghị? Ọ bụrụ na m nwere ike ịnwe ụfọdụ akụrụngwa yiri ya maka ihe na-erughị 900, nke ahụ ga-adị mma.
Daalụ ọzọ Juan! M ga-ele anya na ngalaba nke ị gwara m
Ọktoba 2017-06 na elekere 14:1 nke ụtụtụ
N'ezie, amaghị m ọtụtụ ihe gbasara ịgbakọ, mana achọrọ m ngwa ngwa ịzụta ezigbo laptọọpụ maka ọrụ, Juan nyere m aka biko, achọrọ m PC nke na-abụghị naanị isi 1, nke nwere ikike dị mma na diski ike, nke ahụ. na-arụ ọrụ ngwa ngwa, nke ahụ na-echekwa nke ọma Ọ dị mma, achọrọ m ibudata mmemme na-edezi ụda na vidiyo ma amaghị m ihe m ga-eme, mmefu ego m sitere na 800 ruo 850 anyị, ị nwere ike igosi m biko 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 14:10 nke ụtụtụ
Ị naghị agwa anyị ọtụtụ ihe gbasara njirimara o nwere (nha ihuenyo, ịdị arọ, wdg) yabụ anyị ahọrọla ịga maka nke nwere nnukwu uru maka ego: The Lenovo Ideapad 520s.
Ọ bụ laptọọpụ dị ọkụ nke ọma, yana Intel Core i7 processor nke ga-enye gị ike dị ukwuu maka ngwa ndị ị kwuru ma nweekwa 512GB ssd imepe ngwa ngwa ngwa. Nnukwu ịzụrụ enweghị obi abụọ ọ bụla.
Ọktoba 2017-06 na elekere 24:11 nke abalị
Nnọọ! Anọwo m ọtụtụ ụbọchị na-elele laptop nke ịzụta, agụọla m, ajụrụ m ... mana otu echiche ọzọ na-anabata mgbe niile ma ka mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ọkachamara.
Achọrọ m kọmputa maka nkwadebe nke mmegide m na ọrụ m n'ọdịnihu. Ogo ihuenyo dị mma, oke RAM nke na-adịchaghị elu, nke na-amalite ngwa ngwa na anaghị ejide ya mgbe ị na-agbanwe ihuenyo ma ọ bụ na-ebudata faịlụ ... mmefu ego gburugburu € 800.
Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ na pink ... Ahụla m Lenovo na agba a mana amaghị m ma enwere ndị ọzọ nwere njirimara ka mma na ụda ndị ọzọ.
Ọktoba 2017-06 na elekere 25:10 nke ụtụtụ
Ụtụtụ ọma Cristina,
Ana m edegara gị akwụkwọ ozi na ị hapụla anyị na webụsaịtị laptop anyị dị ọnụ ala.
Obi abụọ adịghị ya, agba ahụ dị oke na nhọrọ nke laptọọpụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ụdị nke tonality ahụ na ndị na-adọrọ mmasị, na-arị elu na ọnụahịa.
N'ịhapụ okwu agba, m ga-akwado ụdị ndị a:
- ASUS K540UA-GQ676T, yana i7 processor na 256GB SSD iji buo ihe niile ngwa ngwa.
- Dell Vostro, dị obere ma dị ike mana ọ dịkwa ọkụ ka ị nwee ike iburu ya nke ọma.
- Lenovo Ideapad 520s, nwekwara SSD na 8GB nke RAM. Ọ bụ ọla edo ka ọ dabara gị. ma enwere ya na pink
Maka agba, ị nwere ike ịzụta ihe mkpuchi polycarbonate nke agba ahụ mgbe niile ma ọ na-emepụta mmetụta mara mma, ị na-echebekwa kọmputa ahụ pụọ na obere ọnya na ncha.
Enwere m olileanya na m nyeere aka.
Ọktoba 2017-06 na elekere 27:8 nke ụtụtụ
Ndewo, enweghị m echiche gbasara PC, ị ga-enyere m aka? Achọrọ m laptọọpụ maka nwa agbọghọ dị afọ 14, enweghị nkọwa, ọrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ebe nchekwa dị mma iji chekwaa foto ... daalụ nke ukwuu.
Ọktoba 2017-06 na elekere 27:9 nke ụtụtụ
Site na ihe ị na-agwa anyị, ụdị HP 15-da0160ns na-ezute karịa nke ọma ma dịkwa ọnụ ala. Ọbụlagodi na ịchọrọ imefu ọbụlagodi obere, enwere ụdị € 350 nke na-edobe 1000GB iji chekwaa ọtụtụ foto na ihe nkiri mana processor adịghị ike n'agbanyeghị na ezuru maka ọrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ndị ahụ.